Dr. Tint Swe's Writings: September 2019
ပို့စ်တခု တွေ့တယ်။ တပည့်လည်းမရှား၊ တစ်ပြားမကလည်းရှိသည့်ဆရာ တဲ့။
ကွန်မင့်ရေးလိုက်တယ်။ ဒီအသုံးစကား ပေါ်စက တပည့်မရှား တပြားမရှိ။ ပေါ်လစီသတ်ပုံအတိုင်းသာ ရေးလိုရင် တစ်ပည့်မရှား တစ်ပြားမရှိ။ ကွန်မင့်ရေးပြီးမှ တူမတယောက်မှန်းသိတယ်။
ဇန္နဝါရီလ (၁၆) ရက်နေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံဆရာများနေ့လို့ ဝီကီပီးယားမှာ ရေးသွင်းထားပါတယ်။ ဟုတ် မဟုတ် မသိပါ။ ကျွန်တော်သိတာက နေ့တိုင်းမှာ အာစရိယကျေးဇူးရှိတယ်။ ဆရာများနေ့ကို ရက်အမျိုးမျိုးမှာကျင်းပကြတယ်။ အောက်တိုဘာ ၅ ရက်မှာ နိုင်ငံ (၂ဝ) မှာ ကျင်းပတယ်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၈ ရက်မှာ (၁၁) နိုင်ငံမှာကျင်းပတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေက ရက်တမျိုးစီမှာ ကျင်းပကြတယ်။
ကျွန်တော်သင်ထားတဲ့ အသိပညာ၊ နှမ်းစေ့ပမာ။ ကျွန်တော်တတ်တဲ့ ဆေးပညာ၊ သလေးစပါးလောက်သာ၊ ကျွန်တော် လုပ်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ရွေးစေ့ထက်တောင် သေးပါတယ်ဆရာ။ ဒါပေမဲ့ဆရာ ဆန်စေ့ကို ထမင်းချက်၊ ဆီထွက်အောင် နှမ်းကိုကြိတ်၊ ကိုယ့်ဝိတ်ကို ရွေးစေ့နဲ့ချိန်ကြည့်၊ အတိအကျ ရတဲ့အဖြေဟာ ကျွန်တော်ပါဆရာ။ ဘာဖြစ်နေနေ ကျွန်တော် တွေးတာ ရေးတာဟာ ဆန်ကုန်မြေလေး မဖြစ်ရေးပါဆရာ။
ဆရာရေးခိုင်းတဲ့ တယောက်အားနဲ့ယူသော်မရ စာစီစာကုံး ခေါင်းစဉ်မှာ စသတ်မပါ။ နားထောင်ဖူးတဲ့ တယောက် တလက် တအား သီချင်းစာသားမှာ စသတ်မပါ။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့မြန်မာစာ မလိုတဲ့တတွေမှာ စသတ်မပါ။
သူများတွေဆီမှာ ခက်တာတွေကို လွယ်တာပြောင်းလာ၊ ကျွန်တော်တို့မှာ အရာရာ အပိုအဆာတွေတိုးတိုးလာ။ ကျွန်တော် တယောက်အားနဲ့သာ ယူနေမိသလားဆရာ။
မနေ့က အပင်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ကြတယ်။ ကိုယ်တိုင်တော့ မလုပ်နိုင်။
၁။ ဆရာ အမှန်က ဖြစ် ဆိုတာပဲကျွန်တော်သိတယ် ဖစ် နဲ့ ဖြစ် ဖြစ် ကအမှန် လားဆရာ
၂။ ဆရာ ဖြင့် / ဖြစ် အသုံး ရှင်းပြပေးပါ။
၃။ ဖြစ် နှင့် ဖြင့် ရဲ့ကွဲပြားမှုလေး၊ သုံးပြုပုံလေးကို သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ စသည်ဖြစ် စသည်ဖြင့်
ဖြင့်နဲ့ ဖြစ်က အတော်ကိုကွာခြားတယ်။
331 BC Alexander the Great အလက်ဇန္ဒားက Darius III of Persia ပါရှားကိုတိုက်ယူ။
1829 South African College တောင်အာဖရိက ကောလိပ်ဖွင့်။
1867 Karl Marx ကားလ်မတ်စ်က Das Kapital အရင်းကျမ်းထုတ်။
1908 Henry Ford ဖိုဒ်ကားကုမ္ပဏီက Model T car ကားစတင်ထုတ်။ $825 ပေးရ။
1918 ပဌမကမ္ဘာစစ်အတွင်း Lawrence of Arabia က ဒမတ်စ်ကပ်ကိုတိုက်ယူ။
1936 Generalissimo Francisco Franco ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖရန်ကိုက Spain စပိန်နိုင်ငံထူထောင်။
1949 Mao Zedong မော်စီတုန်းက People's Republic of China တရုပ်ပြည်သူ့သမတနိုင်ငံထူထောင်။
1949 Formosa ဖေါ်မိုဆာကျွန်းမှာ Republic of China (Taiwan) တိုင်ဝမ်နိုင်ငံထူထောင်။
ကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ အင်ဒီယာနာမြို့က ဆေးသုတေသနသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တွေးတိုးကို နည်းတမျိုးနဲ့ကုတယ်။ Paradise® Renal Denervation (RDN) System စနစ်လို့ခေါ်တယ်။
သွေးတိုးလူနာရဲ့ ကျောက်ကပ်သွား သွေးလွှတ်ကြောရဲ့ overactive renal nerves အလုပ်ပိုလုပ်နေတဲ့ အာရုံကြောလေးတွေက်ို ပိတ်ပေးနည်းလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တကြိမ်တည်းသာ လုပ်ဘို့လိုပါသတဲ့။
အဲဒီသွေးလွှတ်ကြောထဲကို ဘူဘောင်းပုံအဖျားရှိတဲ့ ကသီတာ ခေါ် ပိုက်ကလေးထည့်တယ်။ Ultrasound energy အာထွာဆောင်းအင်နာဂျီလှိုင်းလွှတ်ပေးတယ်။ ခဏသာကြာတယ်။
အဲလိုကုသပေးထားတဲ့လူနာတွေကို နောက် ၂ လနေပြန်စစ်ဆေးတော့ လူနာ ၄ ယောက်မှာ ၁ ယောက်လောက်ဟာ သွေးကျဆေး မလိုတော့တာ တွေ့ရတယ်။ 10 mm Hg ကျသွားကြတယ်။
မင်္ဂလာပါဆရာရှင် ကျွန်မစကားအမှားပါရင် ခွင့်လွတ်ပေးပါဆရာ ကျွန်မနားက နားပြည်ယိုလိုက် သွေးထွက်လိုက် ဖြစ်ပါတယ် ဆရာဝန်နဲ့ပြတော့ နားစည်ပေါက်တယ် ပြောပါတယ်ဆရာ ကျွန်မအခုနားက အသံတိုးရင် ဘာမှ မကြားရဘူးဆရာ အဲဒါကျွန်မ ဘယ်မှာဆေးကုပြကမလဲဆရာ ဆရာရဲ့ ဆေးခန်းနဲ့ ထိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ ဆေးခန်းကို ပြောပြပေးပါလားဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
ဆရာရှင့် ကျွန်မ မသိလိုပါရှင် တောင်းပန်ပါတယ်ရှင် ဆရာကျွန်မအသက် ၄၃ နှစ်ပါ နားဖြစ်တာ အပျိုထဲက ဖြစ်နေတာပါဆရာ ကြာလဲကြာနေပြီဆရာ အိမ်ထောင်ရှိပါတယ် ကလေးတယောက်ရှိပါတယ်ဆရာ အခုကျွန်မနားက အသံတိုးရင် မကြားကပါဘူးဆရာ ကျွန်မနားကို ဘယ်လိုလုပ်ကမှန်းမသိလို့ ဆရာရှိရိုသေစွာမေးကြည့်တာပါဆရာ ဆေးခန်းတွေပြတော့ နားစည်ပေါက်နေတယ် ပြောတယ်ဆရာ ကျွန်မနားက နှစ်ဖက်လုံး သိပ်မကြားရဘူးဆရာ ကျွန်မကို ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲ ပြောပြပေးပါဆရာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
ဘယ်လိုလုပ်ကမှန်းမသိလို့ရေးခြင်းဟာ နားကောင်းကောင်းမကြာရလို့ စင်ပေါ်တက် ကလို့မရသလား စဉ်းစားရတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိလို့သာ ရေးရတယ်။ ရေးတာက မကြားကပါဘူး၊ ဘယ်လိုလုပ်ကမှန်းမသိ၊ နေရာဖြစ်လို့ က နဲ့ ရ မှားရိုက်တာမဟုတ်လောက်။ က နဲ့ ရ အသုံးကို နားမလည်တာသာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အဲလိုမှားရေးတာတွေ မကြာမကြာ လာတယ်။
ကနေကြသော ဆရာမများသို့ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/05/blog-post_680.html
ကနေကြသော အိမ်ထောင်သည် ကလေးအမေနှင့် ဆရာမများသို့ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/blog-post_52.html
၁။ တကယ်တော့ ဒေသတခု လူတဦးတယောက်ရဲ့ ထွင်ထားတဲ့စကားလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာ ရုပ်ရှင်မင်းသာ့း့ ပြောသလို လုပ်ကမယ် သွားကမယ် ကူညီကမှာပေါ့ အတုယူမှားတာသာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆရာ
၂။ ဒေသ မတူတော့ စကားသံ မတူတာဖြစ်မှာပါဆရာ။ အသံအတိုင်းပဲ ရေးဖြစ်လို့ဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော်လဲ အညာသားပါ က ကို စကားပြောတဲ့အခါ က သံ ထွက်ပါတယ်။ ရ သံ မထွက်ဖြစ်ပါ။ ဘာလုပ်ရမလဲ လို့ အသံမထွက်ပဲ။
ဘာလုပ်ကမလဲ လို့ အသံထွက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပါ။
စာရေးသူက အသံဖိုင်ပို့တာ မဟုတ်ပါ။ စာနဲ့ရေး မေးတာ။
၃။ သို့သော်လဲ က ကို နှုတ်ဆွဲနေသည့်အခါ စာရေးသော အချိန် က ကို သုံးမိခြင်းထင်ပါတယ် ဆရာ။
၁။ ယားလို့ပွတ်လိုက်မိတာ အခုစပ်ဖျင်းဖျင်းနဲ့ခံစားနေကလို့ ကြာပြီ ဘာဆေးလုပ်ကမလဲ အသက်က ၂၄ပါ အိမ်ထောင်သည်ပါ
၂။ ရကောက်နေရာမှာ ကကြီးထည့်သုံးကြတယ်ဆရာ။ ကျောင်းကဆရာမများ ကိုယ်တိုင်က သုံးနေကြတာပါ။ ဥပမာ အိမ်စာတွေ မလုပ်ကသေးရင် မနက်ဖြန်အပြီးလုပ်ထားနော် ဆိုတာမျိုးပါဆရာ။
၃။ သင်္ကြန်မတိုင်ခင် ကလေး အမေတယောက်က ကလေးနေမကောင်းလို့ မေးတယ်။ သင်္ကြန်လည်း နီးပြီဆရာ ဘယ်လိုလုပ်ကမလဲတဲ့။ ကလေးချီထားပြီးကပါလို့ ဖြေလိုက်ချင်မိတယ်။ သားချော့တီးလုံးဆိုတာရှိတယ်။
နာမ်ဝိဘတ် ၁၇ မျိုးရှိတယ်။
တချို့က ဥပမာ ယောနယ်မှာသုံးတယ်စသဖြင့်ပြောလာကြတယ်။ ယောနယ်မှာ သင်ပုန်းကြီးနဲ့ မြန်မာစာဖတ်စာ စာအုပ် သီးသန့်နဲ့ မသင့်ပါ။
သမီးရည်စား လင်မယား ဖရင်းတွေ နားလည်းသလိုရေးတာ ပြောရန်မရှိ။ အခုဟာက ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအတွက် ဆရာဝန်ဆီကို စာရေးတာ။
စာမှာ သဒ္ဒါဆိုတာ အဆောက်အဦတခုရဲ့ အုတ်မြစ်လိုပဲ။ ယိုင်နဲ့လာရင် ပြိုပျက်ကျမယ်။ မြန်မာစာဗိမာန်ကြီး ရေရှည် တည်တန့် ခိုင်မြဲပါစေသတည်း။
လာပြန်ပြီ နောက်အမှားတမျိုး။ အရမ်းခင်မင်ရသော သူငယ်ချင်းများထံ ပြန်ပို့ပေး၍ သတင်းဝါကျွတ်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ တဲ့။ သတင်းလို့ရေးတာ မှားတယ်။ အဲတာမှားကြောင်းတင်ထားတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီလောက်က။
သီတင်းကျွတ်လ၊ သီတင်းသုံးသည်၊ သီတင်းသီလယူသည်လို့ ရေးတယ်။
အရင်အမှားတွေပါတဲ့ ဆုတောင်းစာကိုလည်း တယောက်ပြီးတယောက် လျှောက်ပို့နေကြတယ်။ ၂ နှစ် ၃ နှစ်ရှိပြီ။
သိတင်းကျွတ်ရာသီမှာတဲ့။ သီတင်းကျွတ်လို့ ရေးရတယ်။ အစဉ်ကြံစဉ်သမျှတဲ့။ ကြံစည်သမျှလို့ ရေးရတယ်။ အလှူရေစက် လက်နှင့်မကွာ လှူတန်းနိုင်ခြင်းတဲ့။ လှူဒါန်းသည်က ကြိယာ၊ အလှူအတန်းက နာမ်။
သတင်းကျွတ်တဲ့။ သီတင်းကျွတ်လို့ ရေးရတယ်။ သတင်းဆိုတာ ပြည်တွင်းသတင်း၊ နိုင်ငံတကာသတင်း။ အခါသမရတဲ့။ အခါသမယလို့ ရေးရတယ်။
ဝါလကင်းလွှတ်တဲ့။ ဝါလကင်းလွတ်လို့ ရေးရတယ်။ ချမ်းမြေ့ပျှော်ရွှင်ပါစေတဲ့။ ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ရေးရတယ်။ ရှစ်ခိုးကန်တော့ပါသည်ရှင့်တဲ့။ ရှိခိုးလို့ ရေးရတယ်။
အမှားတွေ မရေးသင့်။ အမှားတွေ မဝေသင့်။ အမှားတွေ မလုပ်သင့်။
- Matching blood group before marriage လက်မထပ်ခင် သွေးအုပ်စု စစ်ဘို့ အရေးကြီးသလား https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/matching-blood-group-before-marriage.html
- Immunizations before marriage အိမ်ထောင်ပြုမည့် အမျိုးသမီးသူများအတွက် ကာကွယ်ဆေးများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/immunizations-before-marriage.html
- Marriage Advice သီတင်းမကျွတ်ခင် ဖတ်စေချင် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/marriage-advice-1.html
- Medical check-up before marriage အိမ်ထောင်မပြုခင် ဆေးစစ်ချင် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/medical-check-up-before-marriage.html
- Tests before Pregnancy ကိုယ်ဝန်မဆောင်မီ ဆေးစစ်ခြင်းများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/tests-before-pregnancy.html
မြန်မာစာကို မှန်အောင်မရေးကြသူများကို မြန်မာလူမျိုးဟုခေါ်သည်
Buffalo Neck ကျွဲပခုံး https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/buffalo-neck.html
Hard Surface မာသောနိုင်ငံခြား မမာသောမြန်မာစာ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/hard-surface.html
Hooping Cough ဟု သို့မဟုတ် ကြက်ညှာချောင်းဆိုးသံ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/hooping-cough.html
The End ပြီးပါပြီ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/the-end.html
ကျိ ကြိ ကြည့် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/blog-post_19.html
စာရေးတာ အလွန်ကိုမှားတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်တယ် https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/blog-post_777.html
ဘ ဘို ဘယ် https://doctortintswe.blogspot.com/2019/04/blog-post_6.html
မာသော ရန်ကုန် https://doctortintswe.blogspot.com/2018/03/blog-post_675.html
ပုံစံလို့ရေးရ စိုးရိမ်လို့ရေးရ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/blog-post_144.html
ဆရာ မင်္ဂလာပါခင်ဗျား ကျနော့် အသက် ၃၅ အိမ်ထောင်သည်ပါ ကျွန်တော့့့် ပေါ် ရွေးစိခန့်မှဲ့ပုံစမ် အဖု လေးတွေ ထွက်လာလို့  ဆိုးရိမ်ဖွယ်များရှိရင် ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးပါအုံးခင်ဗျာ အကျိတ်အဖု လေးတွေက မှဲ့ ပုံစမ် အမည်းအဘု လေးတွေပါဗျ။ ဗွတ်စက်လေးတွေရော ပါပါတယ်ဆရာ
ရောဂါအမည် မသေချာသေး။ ပုံစံလို့ရေးရ။ စိုးရိမ်လို့ရေးရ။
သတ်ပုံ ဂရုမစိုက်ပဲရေးကြတာကို မြန်မာစာဟုခေါ်သည်
၅။ ဟုတ်ကပ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့လို့ ရေးရတယ်။ ဘိုလိုရေးချင်ရင် ရက်စ်လို့ ရေးပါ။ ယက်စ်လို့ ရေးလည်းရတယ်။
သတ်ပုံ ဂရုမစိုက်ပဲရေးကြတာကို မြန်မာစာဟုခေါ်သည်။
Yes ရက်စ် https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/yes.html
Hooping Cough ဟု သို့မဟုတ် ကြက်ညှာချောင်းဆိုးသံ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/…/hooping-cough.html
ဆရာခင်ဗျာ ကျမ္မာရေးနဲ့ မဆိုင်တဲ့မေးခွန်းလေးတခု မေးမြန်းခွင့်ပြုပါ။ မြန်မာ Unicode ကဘယ်လောက်ထိ အကျူံးဝင်ပါသလဲ တကယ်လို့များ နိုင်ငံရေး အမျိုးသားရေးတို့ကိုလုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ယင်းယူနီကုတ်ကို အသုံးပြုသင့်ပါသလား မပြုသင့်ပါလားဆရာ။ ယူနီကုတ်အကြောင်းကိုစေ့စေ့စပ်စပ်မသိလို့မေးမြန်းရတာပါ ဆရာခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်လည်း မသိ။ သိပ်နားမလည်။ မေးတာတွေ ဖြေမရ ဖြေတောတွေ မေးသူတွေကဖတ်မရတဲ့ အခက်အခဲကို နေ့တိုင်းကြုံနေရ။ အဆင်ပြေနေတာကို ဘာကြောင့် ခက်ခဲအောင်လုပ်သလဲ မေးနေမိ။ မလုပ်မနေရခိုင်းတဲ့ သိပ်မကြိုက်။
အရင်ဖေါင့်ပေါင်းများစွာပေါ်ခဲ့ပြီး။ ကိုယ်ကြိုက်တာရွေးသုံးနိုင်ခဲ့။ အခုက အဲလို မဟုတ်တဲ့။
မြန်မာစာသတ်ပုံမူကွဲတွေကို တရားမဝင်လုပ်ထားတယ်။ အဲလို အမိန့်နဲ့ခိုင်းတာ ပညာမဟုတ်။ နည်းပညာမဟုတ်လို့ ထင်တယ်။
ပိုကောင်းတာတွေရှိပါမယ်။ ကောင်းတဲ့သူတွေအတွက် ပိုကောင်းမယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဒုက္ခ။ အချိန်ကလည်းမရ။ ဘုန်းတော်ဘွဲ့တွေတော့ နေ့တိုင်းဖတ်နေရ။
မကြာခဏ ဖြေပါတယ်။ လူတယောက်နဲ့တယောက် လိုအပ်ချက်မတူပါ။ ဆေးတမျိုးတည်းကို လူတိုင်းကို ညွှန်မရပါ။ ကျွန်တော့်မှာ အရေအတွက် တသောင်းကျော်စာတွေရှိတယ်။ ဘလော့ရှိတယ်။ ဖေါင့်စနစ်ပြောင်းရင် သုံးမရ ဖြစ်သလား စိုးရိမ်တယ်။ တချို့က ရပါတယ်တဲ့။ တချို့က မရလောက်တဲ့။ ဆရာတွေကလည်း အတော်ကိုများတယ်။ နည်းတွေ ပေးကြတာ အမျိုး ၂၀ ကျော်လောက်ရှိပြီး တူပုံလည်းမရ။
လူဆိုတာ ကောင်းတာ သင့်တာ လိုက်ရှာပြီး ဝယ်ကြ သုံးကြတယ်။ ကျွန်တော် အခုထိ ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်သေးပါ။
ဒီစာအောက်မှာ ယူနီကုဒ်ဘုန်းတော်ဘွဲ့ မရေးကြစေလိုပါ။ ဖျက်ပါမယ်။
Hi ဆရာ ကျနော်ပုလဲဆေးရုံမှာတာဝန်ကျခဲ့ဖူးတဲ့ဆရာလို့ထင်လို့ ဟုတ်ပါသလားဗျ
မေးတဲ့သူက ပုလဲဆေးရုံမှာတာဝန်ကျခဲ့ဖူးတာ ဟုတ်မဟုတ် မသိပါ။ ကျွန်တော်က ၁၉၈၈ မတိုင်မီက ပုလဲဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ၅ နှစ်ကြာတယ်။
စကားစု အထားအသို အရေးကြီးတယ်။ ကတ္တား ခေါ် ပြုလုပ်သူနဲ့ ကံ ခေါ် ပြုလုပ်ခံရသူ နေရာလွဲနေရင် အဓိပ္ပါယ် ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် သစ်ပင်တပင်ကို ကြည့်နေ၏။
အဲလိုအမှားတွေ ပုံနှိပ်မီဒီယာနဲ့ တီဗွီစာတမ်းထိုးတွေမှာလည်း တွေ့ရတယ်။
ဝါသွဲ့ ရွက်ကြွေ လိပ်ပြာပွေတတ်
လာလှဲ့နေလှဲ့အိပ်မက်လှဲ့ဟု
မိုက်မှားကြမ္မာ တွန်းပို့ ရာသို့ 
မြဲမြံနွယ်နှောင် လူတို့ ဘောင်၌
ဝါသွဲ့ ရွက်ကြွေ လိပ်ပြာပွေသတဲ့
နှမ မသိ ရှိမည်လား။ ။
၁၉၇၃ ဖေဖေါ်ဝါရီလထုတ် ရှုမဝမဂ္ဂဇင်းမှာ ကြည်အေးရေးတဲကဗျာ။ စာသားကို သတ်ပုံမပြင်ပဲတင်ပေးသူ ကျေးဇူး။
ကောင်းကင်တခို မိုးတိမ်ညိုနဲ့ ရွာမလိုလို
မိုးတိမ်တွေ ဘယ်ပြေး ရွာသေးပုံမရ
မေးလာတာတွေထဲက အသက် ကျားမ ပြောကြပြီး
ဖေါင့်တူလို့ ဖတ်လို့ရတဲ့ မေးခွန်းတွေဖြေပါရ
ဆရာ mumps က ပါးချိတ်ရောင်တာမဟုတ်ဘူးလား ပသိရောင်တာက tonsilitis လို့ သိထားတယ် ဘယ်လိုလဲဆရာ ကျေးဇူးပြုပြီးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလားဆရာ ပဲသီတာဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါ
2. Chikungunya ချီကန်ဂွန်ညာ ခေါ် ဆင်ဖြူတော်တုပ်ကွေး
3. Flu (Influenza) တုပ်ကွေး
4. Measles ဝက်သက်
5. Mumps ပသိရောင်ရောဂါ
6. Parotitis တံတွေးထွက်အိတ်ရောင်ခြင်း
7. Rubella ဂျာမန်ဝက်သက် (ဂျိုက်သိုး)
8. Tonsillitis အာသီးရောင်ခြင်း
9. H5 N1 Avian influenza ကြက်ငှက်တုပ်ကွေး
10. Influenza A (H3N2) Variant Virus ဝက်တုပ်ကွေးတမျိုး
11. Swine flu ဆွိုင်းဖလူး ခေါ် တုပ်ကွေးတမျိုး
12. Zika ဇီကာ
Vitamins ဗီတာမင်ဝယ်ချင်သူများ မေးရမည့် မေးခွန်းများ
မင်္ဂလာပါဆရာ အသက်က ၃၇ ကျမ အမပါ အိမ်ထောင်ရှိ ကလေးတယောက်အမေ ပေါင်ချိန် ၁၀ဝ ဝန်းကျင် အရင်က ၁၂၅ ပေါင်ရှိပါတယ် ပင်ပန်းပြီး ဝိတ်ပြန်မတတ်တော့လို့ အားဆေးသောက်ချင်လို့ ပါ
မေးခွန်းကို ဖေါင့်ပြောင်းဖတ်ရတယ်။ သတ်ပုံနည်းနည်း ပြင်လိုက်တယ်။
၁။ ကိုယ်သုံးနိုင်တဲ့ ဘတ်ဂျက်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ ဗီတာမင်တွေက ဘာလဲ
၂။ ဘယ်ဗီတာမင်ဆေးတွေက ဟာဘယ် ခေါ် အသီးအရွက်တွေကနေ ထုတ်လုပ်ထားတာလဲ
၃။ အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ သင့်တော်မဲ့ ဗီတာမင်ဆေးတွေက ဘာတွေလဲ
၄။ စားတာသောက်တာတွေနဲ့ အဆင်ပြေမဲ့ ဆပ်ပလီးမင်း ခေါ် အားဖြည့်ဆေးတွေက ဘာတွေလဲ
၅။ ပရိုဘိင်အော်တစ်တွေနဲ့ အင်ဇိုင်းဆေးတွေက ဘာတွေလဲ
၆။ အသက်ရ အမျိုးသားများအတွက် လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်ဆေးတွေက ဘာလဲ
၇။ အသက်ရ အမျိုးသမီးများအတွက် လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်ဆေးတွေက ဘာလဲ
ကိုယ်ဘာဖြစ်နေလို့ ဘာလိုသလဲ သိပါ။ ဘယ်တံဆိပ်က စစ်မှန်လောက်သလဲ သိပါ။ တယောက်နဲ့တယောက် လိုတာ မတူပါ။ တယောက်တည်းမှာတောင် တချိန်နဲ့တချိန် လိုအပ်တာ မတူပါ။ သူများပြောတိုင်း မယုံပါနဲ့။ ကြော်ငြာကောင်းတိုင်း မယုံပါနဲ့။
1. Tonics for Children ကလေးအားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/tonics-for-children.html
2. Prenatal capsule ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-prenatal-capsule.html
3. Prenatal Vitamins ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး အကောင်းနဲ့ အဆိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/prenatal-vitamins.html
4. Probiotics ပရိုဘိုင်အောတစ် https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/probiotics.html
5. Obimin and Omega-3 (အိုဗီမင်) နဲ့ (အိုမီဂါ သရီး) https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/obimin-and-omega-3.html
6. Omega Kids ကလေးတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/omega-kids.html
7. Omega-3 and Pregnancy အိုမီဂါ နှင့် ကိုယ်ဝန် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/omega-3-and-pregnancy.html
8. Omega-3 အိုမီဂါသရီး ဘာလို့ နာမည်ကြီး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/omega-3.html
9. Calcium အမျိုးသမီး နဲ့ ကယ်လ်စီယမ် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/calcium.html
10. Furamin BC သံဓါတ်အားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/iron-supplements.html
11. Folic acid ဖေါလစ်-အက်စစ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/folic-acid.html
12. Tonics အားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/tonics.html
13. Centrum အားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/centrum.html
14. Iron သံဓါတ် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/04/iron-supplements.html
15. Liver Tonics အသဲအားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/liver-tonics.html
ကြော်ငြာဆေးလည်း အများကြီး။ ဒေါက်တာအမျိုးသမီး၊ ဒေါက်တာအမျိုးသား၊ ဒေါက်တာယိုးဒယား၊ ဖြည်စွက်စာဆိုသောဆေး၊ ဂျင်မ်သုံးဆေး၊ ဘယ်က ထုတ်ဆိုတဲ့ဆေး၊ ဂျပန် အမေရိကန်ကဆိုတဲ့ဆေး၊ ဖြေရတာ အားနာရတာတွေက များတယ်။
ဆရာရှင့် သမီး လူအများအလယ်ထွက်တဲ့အခါတွေမှာ state တွေပေါ်မာ တက်ရတော့မယ်အခါတွေမာ မတက်ခင်မာလဲ ဆောက်တည်ရာမရ တွေဖစ် စိတ်နက်လူနက်မကပ် ဘယ်လိုမှထိန်းချုပ်လို့မရဘူး state ပေါ်ရောက်တဲ့အခါတွေမာလဲ တလွဲတွေဖစ် နက် ကိုယ်ကိုကိုယ်မကျေနပ်နိုင်ဖစ်ရပါတယ် အရမ်းစိုးရိပ်စိတ်တွေလွန်ကဲပါတယ်ဆရာ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေအေးစက်လာပီးတော့ ရင်တွေတုန် ဖစ်ရပါတယ်ဆရာ သမီးအနေနက် စိတ်ငြိမ်ဆေး သောက်သင့်လားရှင့် သောက်ရမယ်ဆိုရင်လဲ ဘယ်လိုဆေးကိုသောက်သင့်ပါသလဲရှင့် အကြံပြုစေလိုပါတယ်ရှင့် လေးစားစွာဖြင့်
မာ ဖစ် နက် stage ပီး သတ်ပုံတွေ မှားနေ။ သတ်ပုံကြောင့် မဖြေတာ မဟုတ်။ အသက် အချက်အလက်တွေ မသိ။
1. Buffalo Neck ကျွဲပခုံး https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/buffalo-neck.html
2. Full Stop မြန်မာစာမှာ ဖူးလ်စတော့ မရှိပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/full-stop.html
3. Hard Neck လည်ပင်းမာ သို့မဟုတ် မပျော့သောလည်ပင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/hard-neck.html
4. Hard Surface မာသောနိုင်ငံခြား မမာသောမြန်မာစာ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/hard-surface.html
5. Hi Grandpa အဘရောဂါ အဆက် https://doctortintswe.blogspot.com/2019/02/hi-grandpa.html
6. Hooping Cough ဟု သို့မဟုတ် ကြက်ညှာချောင်းဆိုးသံ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/hooping-cough.html
7. P B D ရောဂါများ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/10/p-b-d.html
8. P ပီ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/p.html
9. P ပီ ကူးစက်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/p.html
10. The End ပြီးပါပြီ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/the-end.html
11. ကနေကြသော အိမ်ထောင်သည် ကလေးအမေနှင့် ဆရာမများသို့ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/09/blog-post_52.html
12. ကျိ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/blog-post_7.html
13. ကျိ ကြိ ကြည့် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/blog-post_19.html
14. ချုပ်ရိုးပေါ်မာဆိုတာ ချုပ်ရိုးက မာနေတာလား https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/blog-post_58.html
15. တယ် နှင့် တရ် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/02/blog-post_11.html
16. တရ် သို့မဟုတ် ကုလားသံ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/blog-post_91.html
17. နင် နင့် နက် နဲ့ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/05/blog-post_393.html
18. ပါပီ ကျိ တေ ဖစ် ကူးစက်ရောဂါများ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/blog-post_86.html
19. ပီ နဲ့ ပြီ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_59.html
20. ပီ ပြီ ပြီး https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/blog-post_30.html
21. ပု https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/blog-post_15.html
22. ဖတ်ရဝူး https://doctortintswe.blogspot.com/2018/11/blog-post_73.html
23. ဘ ဘို ဘယ် https://doctortintswe.blogspot.com/2019/04/blog-post_6.html
24. မာ နှင့် မှာ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/blog-post_19.html
25. မာ နှင့် မှာ သို့မဟုတ် မာသောအရိုး မာသောအိမ် မာသောရန်ကုန် https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_82.html
26. မြန်မာစာကို မှန်အောင်မရေးကြသူများကို မြန်မာလူမျိုးဟုခေါ်သည် https://doctortintswe.blogspot.com/2019/08/blog-post_39.html
27. မြန်မာစာမှာ ပီး မရှိပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_560.html
28. မြန်မာမာဆိုတာ ဘယ်မှာရှိပါသလဲ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/07/blog-post_97.html
29. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကူးစက်ရောဂါသစ်များ ဖြစ်ပွါးနေ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/04/blog-post_53.html
30. သားအိမ်မာလို့ မရေးရ သားအိမ်မှာလို့ ရေးရ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/05/blog-post_26.html
31. အဖုလေးတေ ချိုင်းကြားတေ ပေါင်ကြားတေ ဆေးခန်းတေ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/03/blog-post_25.html
32. ခွေးကလေး ပါပီ ကြောင်ကလေး ပူစီ https://doctortintswe.blogspot.com/2018/10/blog-post_994.html
33. တေ နှင့် ပီး https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/blog-post_68.html
34. တွေ နှင့် တေ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/01/blog-post_480.html
35. မောင်ဖစ် မဖစ် ကိုဖစ် ဦးဖစ် နှင့် ဒေါ်ဖစ်များသို့ https://doctortintswe.blogspot.com/2019/02/blog-post_808.html
Pills Question ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေမှာ အရောင်တူရင် ဆေးတူတယ်
၁။ ဆရာမင်္ဂလာပါ ကျွန်မတားဆေး marveloon 28 သောက်ပါတယ်ရှင့် ဆေးနံပါတ် ၁၅ သောက်ရမှာ ၂၀ ကိုသောက်လိုက်မိပါတယ်ရလာရှင့်သိချင်လို့ပါ
ဆေးသောက်နေသူ အသက် မသိ။ ရာသီ မသိ။
၂။ ဆရာရှင့် ကိုယ်ဝန်တားဆေးများကို ဆေးကဒ်နောက်ကျောပါ နံပါတ်စဉ်အတိုင်းမသောက်ဘဲ ရပါသလားရှင့်။ တနေ့တလုံး ၂၁လုံးပြည့်အောင်သောက်သွားရင် ရပါသလားရှင့်။
မေးခွန်းတွေက နမူနာသာဖြစ်တယ်။ ဒီမေးခွန်းကို ခဏခဏတင်ထားပြီး။ စာရိုက်သူတွေ အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ မြန်မာစာလုံး၊ စာနဲ့ ဂဏန်းကို တကွက်မခြာပဲရိုက်ကြသူတွေက အတော်ကို များတယ်။
ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေမှာ အရောင်တူရင် ဆေးတူတယ်။ ၁-၂-၃ နံပတ်တွေ၊ မြားတွေ (မျှား မဟုတ်)၊ တနင်္ဂနွေ တနင်္လာတွေ၊ လက်ညှိုးပုံတွေက ဆေးသောက်သူ မှတ်ရတာလွယ်စေအောင် လုပ်ပေးထားတာသာဖြစ်တယ်။
၂၈ လုံးပါတာဖြစ်ဖြစ် ၂၁ လုံးပါတာဖြစ်ဖြစ် တနေ့တလုံးသာဆေးအရောင်တူတာကို မှန်မှန်သောက်ရတယ်။
ဒေbပု ဟုကပ် ဖိ အက်
သမီးဆိုသူ အသက် အချက်အလက်တွေ မသိအောက်မှာ မေးတယ်။ ဆရာ သမီးအကိုက အသည်းရောဂါ ရှိနေဒေတဲ့bလား cလားဆိုတာ မသိသေးပု ဆေးနည်းလေးညွန်ပါအုံး တဲ့။
မေးနည်းအကြောင်းတင်ထားတာကို ဖတ်ပါသလား။ သမီးအကိုဆိုသူ အသက် အချက်အလက်တွေ မသိ။
မသိသေးပု ဆိုတာကို နားမလည်။ ပုဆိုတာ မရှည်တာ။ ဒေတဲ့လည်း နားမလည်။ ဒေဆိုတာ ဒေဝဒတ်။
ကွန်မင့်ဖတ်တာနဲ့ ဘီပိုး စီပိုး ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်က သိနိုင်မှာလဲ။ မေးနည်းစည်းကမ်း ပို့လိုက်တယ်။
ဟုကပ် အသက်က ၂၄ ဆေးစစ်တာက အသဲရောဂါ တဲ့
ကျား မ မသိ။ အသဲမှာ ရောဂါအမျိုးမျိုးရှိ။
ဆရာဝန်က အသည်းရောဂါ ဖိနေbတဲ့ အစာအိမ် ရောဂါလဲဖိနိုင်ခြေရှိဒေတဲ့ ကျန်တာကဘာမှ မဖိသေးပုတဲ့
စာရေးတာ အလွန်ကိုမှားတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်တယ်။
ဟုတ်၊ ဟုတ်ကဲ့လို့ ရေးရတယ်။
B စာလုံးပါတိုင်း အသဲရောင်ဘီလား စဉ်းစားရတယ်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ ရေးရတယ်။ ဖိဆိုတာ အပေါ်ကနေဖိထားတာ။ ဒေဆိုတာ ဒေဝဒတ်လို့ ဖြေပြီးသား။ ပုဆိုတာ အရပ်ပုတာလို့လည်း ဖြေပြီးသား။
အက်ဆိုတာ အသံအက်တာ၊ ကွဲအက်တာ။ နောက်ထပ် မမေးတော့ပါရန်။ ဆောရီး။
အဒိလို အဆီထုတ်မယ်ဆိုရင် နောက်တချိန် ဘယ်လို ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေပါသလဲ ဆရာ သမီး ဗိုက်က အရမ်းပူပါတယ် အာ့ကြောင့် အခုလို အဆီထုတ်ချင်လို့ပါ ဆရာ အခု သမီးအရပ်က ၅ပေ ၁ခွဲ ကီလိုက ၆ဝဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ အရမ်းကို ကြည့်ရဆိုး နေပါတယ်
Baschi Pink Quick Slimming ပိန်ဆေးကြော်ငြာ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/baschi-pink-quick-slimming.html
Baschi ပိန်ဆေး ဆက်ရေးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/baschi.html
Low-fat diets for weight loss အဆီနည်းအစာနဲ့ ဝိတ်လျှော့ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/low-fat-diets-for-weight-loss.html
Orlistat ပိန်ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/orlistat.html
Weight loss ပိန်ချင်သလား https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/weight-loss.html
မုံရွာက သူငယ်ချင်း ဘာသာပြန်စာရေးဆရာက ဆေးရုံဆင်းပြီလို့ ရေးတယ်။
အလာတုန်းကအကောင်း အပြန်မှာ ချိုင်းထောက်နဲ့ဆိုတာ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်။
အလာတုန်းက ဟောဟဲဟောဟဲ အပြန်မှာ အသက်ရှူချောင်သွားတာက သမားတော် ခေါ် ဆေးပညာဆရာဝန်။
အလာတုန်းက တယောက်တည်း အပြန်မှာ အပိုပါလာတာက သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်။
မေးတာက ရောဂါ။ အဖြေမှာ သတ်ပုံစာပါ အဆစ်ပေးတာက ကျွန်တော်။ Smile! တချို့က ယူမသွား။ အဆစ် ထားရစ်တယ်။ No Smile!
ရှေးအခါက သောမဒတ္တ အမည်ရှိသော သူဆင်းရဲ ပုဏ္ဏားတဦးသည် အလွန်ရှက်တတ်ကြောက်တတ်သည်။ နွားတယှဉ်းနှင့် လယ်ယာလုပ်ကိုင် အသက်မွေးရာတွင် နွားတကောင် သေသဖြင့် ဗာရာဏသီမင်းထံတွင် တယှဉ်း ပြည့်အောင် နွားတကောင် တောင်းလိုလိုသောကြောင့် နွားတောင်းဂါထာကို တနှစ်ကျော်မျှ သားထံတွင် သင်အံ လေ့ကျက်လေသည်။
ထိုဂါထာ၏သဘောမှာ အရှင်မင်းကြီး ကျွန်ုပ်၏ နွားနှစ်ကောင်တွင် တကောင်သေခဲ့၍ တကောင်လိုနေပါသည်။ ထို လိုသောနွားကို ပေးပါလော့ဟု ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း မင်းရှေ့သို့ရောက်သောအခါ ရှက်ကြောက် လန့်ထိတ်သောကြောင့် ယောင်မှားကာ အရှင်မင်းကြီး ကျွန်ုပ်၏ နွားနှစ်ကောင်တွင် တကောင်သေခဲ့၍ တကောင်ကျန်နေပါသည်။ ထို ကျန်သောနွားကို ယူပါလော့ဟု ဖောက်ဖောက် ပြန်ပြန် လျှောက်ထားမိလေသည်။
၅၅၀၊ ဒုကနိပါတ်၊ သောမဒတ္တဇာတ်ကို ကိုးကားပြီး ဆရာမင်းသုဝဏ်က မြန်မာစာမြန်မာမှုစာအုပ်၊ ဟဿရသအခန်းမှာ ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ခုခေတ်မှာတော့ မြန်မာစာကို ဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန် ရေးသားနေကြပါတယ်။
ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့် ကျွန်မတို့က ပခုက္ကူဘက်ကပါ ကျွန်မတို့ရွာဘက်တွေမှာ ခြင်တွေကဆုပ်ပက်ထားသလိုကို ပေါပါတယ် အိမ်မှာက တနှစ်အရွယ် ကလေးရှိလို့ ခြင်ဆေးမထွန်းရဲ ခြင်ဖြန်းဆေးမသုံးရဲပါဘူးရှင့် အဲဒါ ဘာဆေးသုံးရင် အဆင်ပြေမလဲရှင့်
1. Best Insect Repellents for Kids ကလေးတွေသုံးနိုင်တဲ့ခြင်ဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/best-insect-repellents-for-kids.html
2. Insecticide-Treated Bed Nets ခြင်ထောင်ကို ခြင်ဆေးစိမ်နည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/insecticide-treated-bed-nets.html
6. Mosquito question ခြင်နှိမ်နင်းရေးမေးခွန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/mosquito-question.html
အောင်ချာနဂရ တိုင်းပြည်တည်၍ ဗြဟ္မာ့သဟံမင်းကြီးနန်းစံစေ။ တိုင်းရေးပြည်ရေး သာသနာတော်ရေး သားတော် သမီးတော် အရေးများကို ဝန်တို့နှင့် မေးမြဲတိုင်း မေးပြီးလျှင် တခဏ်းရပ်။
မြောက်နန်းမိဖုရားနှင့် သားတော် ပါပဟိန်တို့ တိုင်ပင်ခဏ်း
မြောက်နန်းမိဖုရားက သားတော် ပါပဟိန်ကို ခေါ်စေ။
မြပုတ္တာနှစ်၊ တရာသက်ဝယ်၊ ဘယက်သွယ်တို့၊ လည်ဝယ်ရစ်သည့်၊ ရွှေကျစ်ကြိုးလိမ်၊ ပါပဟိန်။ မထိမ်မမြူး၊ မယ့်ကျေးဇူးကြောင့်၊ ကြည်နူးသဒ္ဓါ၊ ဘ ရိုက်ရာကို၊ နောင်လာမဲ့သား၊ နို့စို့ရွယ် ခါလယ်သားက၊ တိုင်းကား ရွှေပြည်၊ အပ်နှင်းမည်ဟု၊ ရည်ရွယ်ဂတိ၊ ဆိုချက်ရှိပါသည်၊ သတိသာထားပါတော့ သားတော်မောင်ငဲ့။
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားဘဝမှာ တခဏ်း၊ တရာ၊ သတ်ပုံတွေအတိုင်း သင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ သတိသာထားပါတော့ မြန်မာစာရေးသူများငဲ့။
ကောက်ငန်းငယ်သာ၊ သင်းပြာပြာ ဝေခတောက်ကယ်နှင့်၊
မစုံသူ ဖော်မလွမ်းသော်ကော့၊ ကန်စွန်းငယ်
စစ်စလီငယ်၊ ပြာပီရေကြက်၊ မောက်တင်ငှက်တို့၊
လယ်ကွက်တခို၊ ရိုးကျလျှိုက၊ လူလိုဘဲကြင်၊
ဖော်မစုံတကိုယ်မှာ၊ ရွှေမိုးညို ပတ်ကာချုန်းပါလို့၊
လယ်ကွက်တခို၊ လယ်ကွက်တခို၊ သည်တဝှမ်းမှာလှ၊ ဖော်မစုံတကိုယ်မှာ၊ သတ်ပုံတွေမှာ စသတ်နဲ့ မရေးပါ။ ရေဖေါင်နဲ့ ဖော်မစုံတွေမှာ အသတ်ကို တရားသေမထားပါ။ လူလိုဘဲကြင်မှာ လူလိုပဲကြင်လို့ မရေးပါ။
အဲတာကြောင့် ခုခေတ်မြန်မာစာ မပြုံးနိုင်စရာ။
ဆရာဝန်တယောက်ဆီ စာရေးတာမှာ နော် မထည့်သင့်။ ထည့်ရေးတာတွေ့တိုင်း ပြန်ပြောပါတယ်။ အခုစာက စာရေးလာသူတဦးတည်းအတွက် မဟုတ်ပါ။
Doctor-patient relationship (1) လူနာ-ဆရာဝန် ဆက်ဆံရေး (၁) https://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/doctor-patient-relationship.html
Doctor-patient relationship (2) ဆရာ-လူနာ ဆက်ဆံရေး (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/doctor-patient-relationship-3.html
Doctor-patient relationship (3) ဆရာ-လူနာ ဆက်ဆံရေး (၃) https://doctortintswe.blogspot.com/2017/04/doctor-patient-relationship-3.html
Doctor-patient relationship (4) ဆရာဝန် လူနာ ဆက်ဆံရေး (၄) https://doctortintswe.blogspot.com/2019/07/doctor-patient-relationship-4.html
Doctor-patient ဆရာကြီး မဟုတ်ပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/12/doctor-patient.html
ဆရာဝန်နဲ့ လူနာဆက်ဆံရေးဆိုတာ တည်တည်တန့်တန့် အပြန်အလှန်လေးစားမှု လိုအပ်တယ်။ တွယ်ကပ်မှု အမျိုးစပ်မှု မပါရပါ။ ယဉ်ကျေးမှု ရှိအပ်တယ်။
မေးခွန်း အတော်များများက စာရေးနည်းရော သတ်ပုံတွေပါ သမီးရည်းစား လင်မယား ဖေ့စ်ဘွတ်ဖရင်းတွေကို ရေးသလို ရေးနေကြတယ်။ မသင့်မှန်ပါ။
၁၂၃၆ ခု ကဆုန်လဆန်း ၇ ရက်နေ့ သီဟိုဠ်ကျွန်းစင်း ခေါ်သည့် မီးသင်္ဘောပေါ်တွင် ရေးသည့်စာ။
၎င်းပင်လယ်အတွင်း ဘုရားရွှေဘုန်းတော်မြတ်ကြောင့် လှိုင်းလေမရှိ ချမ်းချမ်းသာသာ ခြောက်ည ခုနစ်ရက်နှင့် သီဟိုဠ်ကျွန်း ဂါလုမြို့ ယခု ဂေါ ခေါ်သည့်ဆိပ်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက် တညရပ်ဆိုင်း နားနေလှည့်ပတ် ကြည့်ရှုကြပါသည်။ ။ သည်ကိုရည်၍ -
စေလံဂျန်းနှင့် မှန်းလိုက်ရင် တူရူဝယ်ပ၊ ပြန့်ပြင်ကျယ် ပင်လယ်ကွေ့ငယ်၊ ဘေးအောက်ဘင်္ဂေါ်။
ရက်မချန် စက်ပျံစင်းနှင့်၊ လျင်ပြင်းချီခဲ့ ထွက်တော့ခါ၊ လှိုင်းလေယက်မျှမပေါ်၊ ဘုန်းတော်ကြောင့်ကြည်ဧး။
ဂေါဂါလု သာနုပျော်ဘွဲ့စေ၊ သည်မြေမှာ တန်ငယ်လင့်လို့၊ မြှော်သင့်ရာမြှော်တော့ခါ၊ ပြည်တော်ကို ရည်ရော်မိသည်နှင့်၊ သဲခင်ထိတွေး။ ဟူ၍ ဘွဲ့ဆို စီကုံးလေသည်။
၁၂၃၆ ခုဆိုတာ ၁၈၇၄ ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာမြို့ဆိုတာ စင်္ကာပူ။ ဘေးအောက်ဘင်္ဂေါ်ဆိုတာ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်။
မြှော်သင့်ရာမြှော်တော့ခါ နဲ့ တညရပ်ဆိုင်းသတ်ပုံတွေ သတိထားသင့်ပါတယ်။
မြန်မာသတင်းစာဆရာခင်ထံ တတိယပေးစာ အဆက်
ဆယ်ရောင်ပြိုင် ဂီရန်မှူး၊ ရှည်ကြူးစံတဲ့မြေ။
သည်ကထွက်ခဲ့ရင်၊ လှိုင်းယက်ကယ်ရေပြင်မှာဖြင့်၊ ငွေသင်ဖျာ သာပြန့်ခင်းနှယ်သို့၊ မြင်တွင်းကြည်စဘွဲ့၊ စိမ်းလဲ့ယဉ်ထွေ။
ရှစ်ခွင်ကို မမြှော်ရက်ပါဘု၊ ဘော်မက်သူသဲ့ရွှေမှာကွယ်၊ ကွဲကြေဘွဲ့ စခန်း။
လင်္ကာကျွန်း၊ မြောက်ယွန်းထောင့်ခတ်ဆွယ်၊ တနယ် တပယ်ခွင်မို့၊ ဆိုက်မဝင် မြင်ယုံမျှငယ်၊ ဝေးကမျက်မှန်း။
တနယ် တပယ်ခွင်မို့ သတ်ပုံကို တင်ပြပါတယ်။
စက်တင်္ဘာ ၂၇ ရက်နေ့။ အဖွဲ့ချုပ် ခေါ် NLD ပါတီတည်ထောင်ခြင်း နှစ်ပတ်လည်နေ့။ ပါတီဌာနချုပ် ပဌမဆုံး တည်နေရာပုံလည်း တွေ့တယ်။ သတင်းစာဖြတ်ပိုင်းပုံလည်း တွေ့တယ်။ သတိရတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့မှာ ပါတီရုံးလေးတခု ဖွင့်ခဲ့ကြတယ်။ မြေစိုက် ထရံကာ ကပ်မိုး။ ပုံမရှိပါ။ အဲဒီကာလမှာ ဖလင်သုံး ကင်မရာလေးတလုံးတောင် မတတ်နိုင်။ ဒါပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအနိုင်ရခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်မွေးနေ့ရက်မှာ ပုလဲမြို့နယ်ပါတီရုံးသစ်အတွက် တတ်နိုင်တာသလောက်လေး အလှူငွေပို့လိုက်တယ်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလဟာ မြန်မာလို ၁၃၈၁ ခုနှစ် သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၃ ရက်နေ့ကနေ တန်ဆောင်မုန်း လဆန်း ၄ ရက်နေ့အထိ ကျရောက်တယ်။ အောက်တိုဘာ ၁၃ နေ့ဟာ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ အဘိဓမ္မာနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာစကားလုံးဟာ လက်တင် octō ကနေလာတယ်။ ရှစ်ဖြစ်တယ်။ ပြက္ခဒိန်ပေါ်ကာစ ၁ဝ လသာ ပါစဉ်က အဋ္ဌမလဖြစ်လို့ပါ။ ကမ္ဘာ့မြောက်ဖက်ခြမ်းမှာ အေးတော့မယ်လို့ ဆိုလိုတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁ = တရုပ်အမျိုးသားနေ့၊ ဆိုက်ပရပ်စ် လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ နိုက်ဂျီးရီးယား လွတ်လပ်ရေးနေ့။ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နေ့။
အောက်တိုဘာ ၂ = ဂန္ဒီမွေးနေ့၊ နိုင်ငံတကာ အကြမ်းမဖက်ရေးနေ့။
အောက်တိုဘာ ၃ = ဂျာမန်စည်းလုံးညီညွတ်မှုနေ့။
အောက်တိုဘာ ၄ = ကမ္ဘာ့တိရစ္ဆာန်နေ့။
အောက်တိုဘာ ၅ = ပေါ်တူကီနိုင်ငံတည်ထောင်သည့်နေ့။ နိုင်ငံတကာကျောင်းဆရာများနေ့။
အောက်တိုဘာ ၆ = ကမ္ဘာ့ ဗိသုကာနေ့။
အောက်တိုဘာ ၈ = ခရိုရေးရှား လွတ်လပ်ရေးနေ့။
အောက်တိုဘာ ၁ဝ = တိုင်ဝမ် အမျိုးသားနေ့။
အောက်တိုဘာ ၁၂ = စပိန် အမျိုးသားနေ့။ ကိုလန်ဘတ်စ်နေ့။ ကနေဒါ ကျေးဇူးတော်နေ့။
အောက်တိုဘာ ၁၅ = ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် သန္ခေသားဆုံရှုံးမှု သတိရခြင်းနေ့။
အောက်တိုဘာ ၁၆ = ကမ္ဘာ့ အစားအစာနေ့။
အောက်တိုဘာ ၂ဝ = ဝိညာဉ်နေ့။
အောက်တိုဘာ ၂၁ = ပန်းသီးနေ့။
အောက်တိုဘာ ၂၄ = ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂနေ့။
အောက်တိုဘာ ၂၅ = ရိုမေးနီးယားတပ်မတော်နေ့။
အောက်တိုဘာ ၂၆ = သြစတြီးယား အမျိုးသေားနေ့။
အောက်တိုဘာ ၂၇ = စန့်ဗင်းဆင့်နှင့် ဂရင်နေဒင်းစ်လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ တာ့ခ်မင်နီစတန်လွတ်လပ်ရေးနေ့။
အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် = သီတင်းကျွတ်လပြည့် အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့
အောက်တိုဘာ ၂၉ = တူရကီပြည်ထောင်စုနေ့။
အောက်တိုဘာ ၃၁ = ဒေဝါလီနေ့။
အောက်တိုဘာ ၃၁ = ဆလိုဗေးနီးယား ပြန်လည်တည်ဆောင်ခြင်းနေ့။ Halloween (All Hallows Eve) ဟယ်လိုဝင်းနေ့။
• International Walk to School Day ကျောင်းသို့လမ်းလျှောက်ခြင်းလ။
• Brain Tumor Awareness Month ဦးနှောက်အကျိတ် အသိပညာပေးလ (ကနေဒါ)။
• Celiac Sprue Awareness Month စီးလီးယက် စပရူးရောဂါ အသိပညာပေးလ။
• Health Literacy Month အကျိုးပြုစာပေလ။
• Healthy Lung Month အဆုပ်ကျန်းမာရေးလ။
• Liver Awareness Month အသည်းပညာပေးလ။
• National Breast Cancer Awareness Month ရင်သားကင်ဆာလ (ယူအက်စ် + ကနေဒါ)
• National Dental Hygiene Month (US) သွားကျန်းမာရေးလ (ယူအက်စ်)
• National Down Syndrome (US) ဒေါင်းဆင်ဒရုမ်း အသိပညာပေးလ (ယူအက်စ်)
• National Infertility Awareness Month သားသမီးမရနိုင်ခြင်းအသိပညာပေးလ (ယူအက်စ်)
• National Domestic Violence Awareness Month အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု အသိပညာပေးလ(ယူအက်စ်)
• National Lupus Erythematosus (US) လူးပတ်စ် အရစ်မတိုးဆပ်စ်ရောဂါ အသိပညာပေးလ (ယူအက်စ်)
• National Physical Therapy Month ရုပ်ပိုင်းကုသရေးလ (ယူအက်စ်)
• National Spina Bifida Awareness Month စပိုင်နာ ဘိုင်ဖစ်ဒါ အသိပညာပေးလ (ယူအက်စ်)
• Rett Syndrome Awareness Month ရက် ဆင်ဒရုမ်း အသိပညာပေးလ (ယူအက်စ်)
• Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) ရုတ်တရက် မွေးကာစကလေးသေဆုံးခြင်း အသိပညာပေးလ
• World Blindness Awareness Month ကမ္ဘာ့မျက်မမြင် အသိပညာပေးလ။
• American Pharmacist Month အမေရိကန် ဆေးဝါးပညာရှင်များလ။
• Medical Ultrasound Awareness Month ဆေးဖက်သုံး အာလ်ထွာဆောင်း အသိပညာပေးလ။
• Mental Illness Awareness Week စိတ်ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးလ။
• World Polio Day အောက်တိုဘာ ၂၄ ကမ္ဘာ့ ပိုလီယိုနေ့။
• ကျောက်မျက်ရတနာ = Ruby ပတ္တမြား၊ Garnet ပတ္တမြားရောင်ကျောက်၊ Lucky Charms အစိမ်းရောင်ကျောက်၊ Aquamarine အပြာရောင်ကျောက်၊ Beryl အဝါရောင်ကျောက်၊ ဥသဖရားနှင့် ကြောင်ကျောက်။
• ပန်း (နိုင်ငံတကာ) = Calendula အဝါ-လိမ်မော်ရောင်ရှိသည့်ပန်း (မြန်မာလိုမသိပါ)။
• မြန်မာ့ ဆယ့်နှစ်ရာသီပန်း = ယင်းမာပန်း (တော်သလင်းလ) နဲ့ ကြာပန်း (သီတင်းကျွတ်လ)။
• ဆယ်နှစ်ရာသီခွင် = Libra တူရာသီ (အောက်တိုဘာ ၂၂ အထိ) + Scorpio ဗြိစ္ဆာရာသီ (အောက်တိုဘာ ၂၃ မှစ၍)။
• စားစရာ (ယူအက်စ်) ပီဇာလ၊ ပေါ့ကွန်လ၊ ဝက်သားလ၊ ဝက်အူချောင်းလ၊ ဒိန်ခဲလ။
အလေ့ကျပေါက်နေတဲ့ ခရမ်းချဉ် နှစ်ပင်ကနေ အသီးခြောက်လုံးသီးနေပြီ။ နေ့တိုင်းထွက်ကြည့်တယ်။ တနေ့က မိတ်ဆွေ တယောက်အိမ်က ကိုယ်တိုင်စိုက်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်းသီးတွေပေးလိုက်တယ်။ ကျေးဇူး။ အော်ဂဲနစ်ဖြစ်လို့ ဟင်းချက်တဲ့သူက စာဖွဲ့တယ်။ ထောပတ်ခဲ လှီးရသလိုပဲတဲ့။ စားတာတော့ ပြောမနေနဲ့ ဒါးနဲ့ကို ကောင်းမှန်းသိရသတဲ့။
အခုပဲ ခမ်းချဉ်သီးဟင်းချက်တဲ့သူက လာပြောတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးပင် ပိုင်ရှင်ပေါ်ပြီတဲ့။ ယုန်ကလေးတကောင်က ဖြတ်ဆွတ်ယူ မြေကြီးထဲတွင်းတူးပြီး မြှုပ်နေတာ မြင်ခဲ့ရသတဲ့။ သူတို့အတွက် ဆောင်းမှာ အစာခက်တယ်။ ကိုယ်စားရတာထက် အရသာရှိတယ်။
ယုန်ကလေးက နားရွက်ထောင် ဆောင်းတွင်းစာကို သူသိုလှောင်။
ကနေ့ထွက် ဆေးသုတေသနသတင်းမှာ Premium teabags အကောင်းစား လက်ဖက်ခြောက်အိတ်ကလေးတွေထဲမှာ မိုက်ခရိုပလပ်စတစ် ခေါ် သေးငယ်လှတဲ့ ပလပ်စတစ်စလေးတွေ ဘီလီယန်များစွာ ပါနေပါသတဲ့။ ကနေဒါက ပညာရှင်တွေ လုပ်တဲ့လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသနလုပ်သူတွေက သောက်သုံးပြီးသား တီးဘက်လေးတွေကိုစုပြီး ရေထဲမှာ 95C (203F) အထိအပူပေးတယ်။ လက်ဖက်ခြောက်အိတ်တခုတည်းကနေ မိုက်ခရိုပလပ်စတစ်ပေါင်း 11.6bn ဘီလီယန် နဲ့ ပလပ်စတစ်မဟုတ်တာ 3.1bn ဘီလီယန်ရေတွက်လို့ရပါသတဲ့။ မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်အောင် သေးငယ်ကြတယ်။
အဲတာတွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်တွေပါ။ ဆောရီး။
5mm ထက်သေးငယ်တဲ့ မိုက်ခရိုပလပ်စတစ်ဆိုတာတွေက ကနေ့လူတွေ စားသောက်နေတာတွေ အတော်များများထဲမှာ ပါနေတယ်။ ရေသန့်ဗူးက အကောင်းဆုံးဥပမာတခု။
ဟိုရှေးရှေးတုန်းက သဘာဝနဲ့နီးနီးစပ်စပ် အဆင့်အတန်းနိမ့်နိမ့်သာ နေထိုင်စားသောက်လာခဲ့ကြရာကနေ ခုခေတ်မှာ တောက်ပြောင်လှပ ဆန်းပြား ခေတ်မီလှတာတွေကိုသာ အမှီသဟဲပြုနေကြတယ်။ ဟိုအရင်က မရှိခဲ့တဲ့ ရောဂါ အသစ်အဆန်းတွေလည်း တနေ့တခြား များသည်ထက် များလာတယ်။ လူသားတွေ ဘယ်ကိုဦးတည်နေကြသလဲ။
စလပ်ပန်း ဇလပ်ပန်း ဘယ်ဟာအမှန်ပါလဲ ဆရာ
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာ စလပ်ပန်း။ သတ်ပုံစာအုပ်ဟောင်း ၂ အုပ်ထဲမှာ မပါ။ အသံထွက်တော့ ဇလပ်ပန်းသံ ထွက်ကြတာ များတယ်။
တလက်မခန့်၊ တလက်မခွဲခန့်၊ တထပ်ချင်း၊ တနှစ်ပတ်လုံး၊ ကော်တမျိုး၊
တနင်္သာရီ နဲ့ စစ်တကောင်း တို့ကို စမသတ်ကြသေးလို့ထင်ပါတယ်။ သတ်ပုံမှန်မှ ပန်းမွှေး၏။ မြန်မာစာလည်း မွှေး၏။
တက္ကသိုလ်ဆုမြိုင်ရေးသားသည့် ၁၉၇၉ ခုနှစ်ထုတ် ၁၀ မိနစ် သို့မဟုတ် အောင်မြင်ရေးနည်း ၉၉ စာအုပ်
မိတ်ဆွေကောင်း တဦးနှင့် ဆုံဆည်း တွေ့ကြုံ ပေါင်းဖက်လိုက်ရသကဲ့သို့ရှိလှသည်။ (လုပ်သားပြည်သူ့နေ့စဉ် သတင်းစာ)
အဲဒီအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းခန့်တဲ့ မြန်မာစာအဖွဲ့ ခေါ် သတ်ပုံပြင်အဖွဲ့ကြီးက အာဏာမရသေးပါ။ ၁၉၈၀ နောက်ကစပြီး ကနေ့အထိ တတွေကို စသတ်မိန့်ပေးထားတယ်။ လူအတော်များများ ကြောက်စိတ်ကုနည်းတမျိုး လိုအပ်ကြတယ်။
မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော် online မှာဆရာတင်တဲ့ post တခုမှ depresstion အကြောင်းတွေ့မိပြီး ဆရာနဲ့ အချိန်ခဏလောက် disscuss လုပ်ချင်လို့ပါဆရာ။ Depression ရဲ့ဝေဒနာကိုရောဂါအဖြစ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ဦးဏှောက်ဆဲတွေ မှားယွင်းမူဆိုပြီ။ ကျွန်တော် ညတွေလုံးဝမအိပ်ဘဲ မိုးလင်းမှအိပ်ကာ နေ့ရက်တွေကို မြန်မြန် ကုန်ဆုံးချင်စိတ်နဲ့ ဖြတ်ကျော်ခဲ့တာက ၁နှစ်ကျော်ပါပြီ။ အခန်းထဲလှောင်ပိတ်ကာ ညအချိန်ခဏလောက်သာ ဒီအချိန်တွေ အပြင်ခဏထွက်ဖြစ်ရုံဘဲရှ်ိတယ်။ လူတွေနဲ့ဝေးပြီး အေးချမ်းဆိတ်ဆိတ်ညိမ်သက်မူဘဲ လိုချင်ရယူခဲ့ပါတယ်။ ပျော်စရာ မရှိတာကြာခဲ့ပါပြီ။ ယုတ်စွအဆုံး သင်္ကြန်ပြီးတာတောင် ပြီးလိုက်မှန်းမသိထိဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်။ အမေ့ကြောင့်သာ ကျွန်တော် ဆက်လက်ရှိနေသေးတယ်လို့ထင်မိတယ်ဆရာ။ အခုကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အခြေနေက ဘယ်လိုအခြေနေမှာ ရှိလဲ ဆိုတာရယ် ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ယူဆမူ့တွေကြောင့်depressionဖြစ်တာလားရယ် ကိုယ်တိုင် ရုန်းထွက်မယ် ကြိုးစားခဲ့တိုင်း အစကပြန်စရတဲ့အခါ ခက်ခဲ့မူနည်းနည်းစတွေ့ရင်တောင် ဘဝကမတန်ဘူးဆိုပြီး ပြန်မျောသွားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ဆရာ ကျေးဇူးပြုအကြံပေးဖို့တောင်းပန်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော့်အသက်က ၂၃ ပါဆရာ။
စာ ၄ ပုဒ်အနည်းဆုံးရေးတင်ထားတယ်။ စိတ်အထူးကုဆရာဝန်နဲ့သာ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ရိုးရိုးဆရာဝန်သာ ဖြစ်တယ်။ အဝေးကနေ မမြင်ရ မစမ်းသပ်ရသူကိုလည်း ဆေးကုသလို မလုပ်ပါ။
5. Depression In Pregnancy ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/depression-in-pregnancy.html
6. Postpartum depression ကလေးဖွါးပြီးဖြစ်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/postpartum-depression.html
7. Stress, depression and the holidays အားလပ်ရက်များနဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/stress-depression-and-holidays.html
ဆရာ့လို ပညာရှင်က စေတနာနဲ့ လမ်းပြပေးနေတာကို တန်ဖိုးထားရမှာပါ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ပညာရှင် မဟုတ်ပါ။ ငယ်ငယ်ကသင်ရတဲ့ သင်ပုန်းကြီးနဲ့ သူငယ်တန်းဖတ်စာအတိုင်း ရေးတဲ့သူ။ အသားလိုလို့ အရိုးတောင်းတာလည်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ခေတ်က သူငယ်တန်း မြန်မာသင်ပုန်းကြီး ဖတ်စာသစ်ကိုသာ တင်ပြပါမယ်။
အပေါင်းအဖေါ်၏ ဘီးကို မယူရ။
မိမိဘီးကို မကြာမကြာ ဆေးကြောပါ။
ပဲ ဝ့ နှမ်း အလှည့်ကျ ချပါ။
မယ်အုံးက ဆံထုံးမှာ ပန်မည်။
အားလုံး လုံအောင် ဖုံးထားပါ။
တံခါး လုံအောင် စေ့ထားပါ။
သင်ပုန်းကြီးထဲမှ ခြံခုန်၍ထွက်ပြေးသွားသူများကို မြန်မာစာပညာရှင်များဟုခေါ်သည်။
HIV သတင်းမှားတွေ မရေးကြ မတင်ကြ မဝေကြ မယုံကြစေလိုပါ
Etiquette ယောက်ျားလေး မိန်းကလေး အမျိုးသား အမျိုးသမီး